Apple ichafanirwa kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa muIndia kana ichida kuvhura Apple Stores munyika | IPhone nhau
Kuvhura misika mitsva yekambani yeCupertino-based Zviri kuve zvakaoma kupfuura zvandaifunga, kunyanya kuIndia, uko Apple iri kutarisa zvese zvayakanakira mumwedzi ichangopfuura. Asi kunyangwe nzendo dzakasiyana siyana dzakaitwa naTim Cook kuenda kunosangana nemutungamiri wehurumende, kwete chinhu chega chaanogamuchira kubva munyika inyaya dzakaipa.
Iyo kambani yanga ichiedza tora mvumo inokutendera kuti uzarure zvitoro zvako munyika kumira zvichienderana nevashambadziri avo varikutarisira kutengesa zvigadzirwa zvavo munyika. Mavhiki mashoma apfuura, hurumende yeIndia yakashandura mitemo ichibvumira makambani ekunze asingagadzire munyika mavo kuti ave nemukana wekuvhura zvitoro zvavo, asi nemamiriro mamwe chete.
Apple inofanira kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa munyika muzvitoro zvayo. Zvichida makumi matatu kubva muzana zvezvigadzirwa zvinotengeswa neApple Chitoro zvinofanirwa kugadzirwa munyika. Iyo kambani parizvino haisi kugadzira chero zvigadzirwa kana zvishandiso muIndia kunyangwe paine hurongwa hweramangwana hwekuita kudaro, kuburikidza naFoxconn, munguva pfupi iri kutevera.
Apple yakakwidza danho rehurumende, ndokupindura makore mashoma apfuura ichiti kunyangwe zvataurwa zvese naApple, kutengeswa kwezvigadzirwa zvakagadzirwa munyika zvinosungirwa, iyo inoisa iyo Cupertino-yakavakirwa kambani munzvimbo yakaoma, iyo yakanga yatotanga kutsvaga nzvimbo mumaguta matatu akakosha epasirese kuti vakwanise kuvhura zvitoro zvavo vega kusati kwapera 2017.
Ndiani anoda chimwe chinhu, zvinotora chimwe chinhu. Apple ichafanirwa kupfuura nepakati hoop Uye kambani inoshaya zvekuita kunze kwekugadzirisa mutsara wezvigadzirwa iyo yaizokwanisa kutengesa muApple Stores munyika, kana ichida kupinda mumusika unokwikwidzana nevanhu vanopfuura 1.250 bhiriyoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple ichafanirwa kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa muIndia kana ichida kuvhura Apple Stores munyika
IPhone kuvandudza chirongwa chinosvika kuSpain (nedzimwe nyika)